आज ‘नरहरी’ अर्थात माघे संक्रान्ति, मुलुकभर हर्ष उल्लासका साथ मनाइँदै ! – Sodhpatra
आज ‘नरहरी’ अर्थात माघे संक्रान्ति, मुलुकभर हर्ष उल्लासका साथ मनाइँदै !
प्रकाशित : १ माघ २०७७, बिहीबार ०९:२७ January 14, 2021
धनगढीः आज माघे संक्रान्ति अर्थात् माघी पर्व स्नान, दानलगायत विभिन्न धार्मिक कार्य गरी मनाइँदै छ । माघे संक्रान्तिलाइ बैतडी लगायत सुदूर पहाडका जिल्लाहरूमा ‘नरहरी’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
नेपालीका लागि माघे संक्रान्ति विशेष पर्व मानिन्छ । ज्योतिष शास्त्रअनुसार सौर मासको हिसाबले माघे संक्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यसलाई मकर संक्रान्ति (माघे संक्रान्ति) पनि भनिएको हो ।